Tsipy kanetibe – «Mada 2019»: lasan’ny ekipan’ny Les As ny dingana faharoa | NewsMada
Tsipy kanetibe – «Mada 2019»: lasan’ny ekipan’ny Les As ny dingana faharoa
Tontosa, ny faran’ny herinandro lasa teo, ny dingana faharoa, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja tsipy kanetibe, sokajy olon-telo miaraka lehilahy. Norombahin’ny klioba Les As Avaradrano ny amboara.
Lasan’ny ekipan’ny Les As Avaradrano, nisy an’i Balotelli sy i Haja ary i Lala, ny fandresena teo amin’ny dingana faharoa, hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja tsipy kanetibe. Fifaninanana, notanterahina tetsy amin’ny kianja ANS Ampefiloha, ny asabotsy 13 sy ny alahady 14 avrily lasa teo.
Resin’izy ireo, teo amin’ny famaranana, tamin’ny isa 13 no ho 9, ny ekipan’ny CBT Analamanga, nahitana an’i Jean-Marc, i Côbra, i Jaba. Niady ny lalao teo amin’ny roa tonta, saingy nisongadina ny fahaiza-manaon’i Balotelli, teo amin’ny tifitra. Raha tsiahivina, lavon-dry Balotteli, teo amin’ny manasa-dalana, i Haja sy i Solokely ary i Lava, mpilalaon’ny AS Mama. Ny klioban’ny CBT, notarihin’i Kissor sy i Tens, kosa no resin-dry Côbra, teo amin’izany dingana izany.
Marihina fa tsy nisy ekipa avy amin’ny ligin’i Vakinankaratra niatrika ity dingana faharoa ity. Tafita amin’ny famaranana lehibe ireo ekipa 16 niatrika ny ampahavalon-dalana.
Ho an’ny “junior” indray izay niatrika ny dingana voalohany. Lasan’ny CBT ny fandresena, rehefa nanilika ny CBAT Ambalavao Tsienimparihy, tamin’ny isa 13 no ho 10. Nahatratra 28 ny isan’ireo ekipa niatrika izany, mbola tsy nahitana solontena avy amin’ny ligin’i Vakinankaratra ihany koa.
Teo amin’ny vehivavy, voahosotra ho tompondaka ny ekipan’ny CBT, nisy an’i Tsiory sy i Fetra, ary ny Vespa Analamanga no voalohany teo amin’ny “veteran”.
Hitohy any Moramanga, ny 18 sy ny 19 mey ho avy izao, ny dingana fahatelo, amin’ity fifaninanam-pirenena ity.